Haweenka guurka ka caaggan ee bikranimada ku waara - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka TODAY'S CATHOLIC/JOE ROMIE
Dumar ay tiradoodu gaareyso 4,000 oo ku kala nool dalal kala duwan ayaa go'aan ku gaaray iney waligood ilaashadaan gabarnimadooda ama bikranimadooda, guurka bani'aadamkana ay ka caagganaadaan, iyagoo arrintaasna ku saleeyay waxyaabo ay diin ahaan u aaminsanyihiin.
Dhammaantood waa dumar heysta diinta masiixiga oo ka mid ah diimaha ay ku dhaqmaan dadka ugu tirada badan ee caalamka.
Aroos aan aqal gal lahayn?
Jessica Hayes, waxay kamid tahay dumarka noloshooda gabarnimo u hibeeyay ee guurka ka caaggan.
Waxay isku soo diyaarisay una soo labisatay qaabkii aroosadda, laakiin markii ay soo hor istaagtay wadaad diimeedkii guurkeeda go'aamin lahaa ee xafladda ka soo qeyb galay, ma jirin nin garabkeeda taagnaa oo loo guurin karay.
Waxay aaminsaneyd inay guursaneyso Jesus (oo Muslimiinta u yaqaanaan Nabi Ciise), waxaana loo tix galiyay codsigeeda ahaa in xafladda arooska la dhigo.
Intii ay xafladda aroosku socotay ayey wacad ku martay ineysan waligeed nin gogol la wadaagi doonin, gabarnimadeedana ay heysan doonto ilaa inta ay ka dhimaneyso.
Ms Hayes, oo 41 sano jir ah waligeed waxay joogtay macbadka waxaana la xaqiijiyay iney wali gabar tahay, waxayna ka mid tahay haweenka jirkooda u hibeeya diinta ay aaminsanyihiin iyo ilaahooda.
"Badanaa waxaa la i weydiiyaa su'aasha ah: 'ma lagu qabaa?', anigana waxaan mar walba ku jawaabaa sharraxaad yar oo ku saabsan inaan ahay sida dumarka walaalaha masiixiyiinta la yiraahdo ee guurka ka caaggan" ayey tiri Ms Hayes.
"Waxaan macallimad ahaa muddo 18 sano ah, waxaan ardayda wax ku bari jiray dugsi sare oo ah kii aan aniga markii hore dhigtay" ayey tiri haweeneydan oo ku nool gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Dumarka noocan ah ma aha kuwo aad loo yaqaanno, sababtoo ah kaniisadaha madhabta Kaatooliga ayaa arrintan shaaciyay muddo hadda laga joogo wax ka yar 50 sano oo kaliya.
Lahaanshaha sawirka JOE ROMIE
Tirada haweenka guurka ka caaggan oo sii kordheysa
4,000 oo haween ah oo wali bikro ah ayaa ku nool 78 waddan oo ka mid ah caalamka, sida lagu sheegay daraasad la sameeyay sannadkii 2015-kii.
1,220 kamid ah dumarkan waxay ku noolyihiin waddamada Faransiiska iyo Talyaaniga, waana labada dal ee leh haweenka ugu badan ee bikronimada ku waara.
Waddamada Mareykanka, Mexico, Romania, Poland, Spain, Jarmalka iyo Argentina ayaa sidoo kale heysta tiro fara badan oo ka mid ah haweenkaas.
Ilaa sannadka 2020-ka waxaa la filayaa in tirada dumarka guurka ka caaggan ay gaarto 5,000 oo ruux.
'Dhaqan diimeed waligiis soo jiray'
Horay kaniisadaha masiixiyiinta way u lahaayeen haween aan la guursanin oo sidaas ku weynaada, hase ahaatee waxaa dad fara badan dhagahooda ku cusub in haweeney loo dhigo xaflad aroos ah iyadoo aan waligeedna aqal galeynin.
Arrintaas ayaa soo socotay tan iyo xilliyadii ugu horreeyay ee taariikhda miilaadiga.
Qaar badan oo ka mid ah haweenkaas guurka ka caagganaan jiray ayaa u dhintay sababo la xiriira waxa ay aaminsanyihiin.